Digital Video Editing ( မြန်မာ ) ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Myanmar E-Books » Digital Video Editing ( မြန်မာ )
By နေမင်းမောင်4:57 PM16 comments
ဒါလေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆရာ သန်းထိုက် ရေးသားထားတဲ့ အသုံးချ ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်နည်း ပညာ ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်.။ အထဲမှာ ခေါင်းစဉ် အလိုက် မသိမဖြစ်စနစ်တွေ Video tape formats တွေ၊ Video system formats တွေကအစ အသေးစိတ်ရေးပေးထားပါတယ်။ ဝါသနာ မပါရင်တောင် ဆောင် ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်လေး တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 10 MB ပဲရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ.။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်.။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ် လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ.။။
အားလုံးပဲအဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီစာအုပ်အတွက် SOFTWAR လေးတင်ပေးပါလား
thanks so much brother :-)
REQULAR May 21, 2012 at 3:49 PM
ကျွန်တော်က ဒီနေမင်းမောင် ၀က်ဘ်ဆိုဒ်ကို Google ကျေးဇူးနဲ့သိခဲ့ရတယ် ဒီနေမင်းမောင်ဝက်ဆိုဒ်ကို ၀င်လေ့လာ ၀င်ဖတ်ကြည့်တော့ အင်မတန်မှ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ဆိုဒ်တစ်ဆိုဒ်ပါပဲ ဒီလိုနည်းပညာတွေကို အခမဲ့ဝေမျှပေးတဲ့စိတ်ဓာတ် လေးစားလောက်ပါပေတယ်ဗျာ
မုန်တိုင်း May 21, 2012 at 7:18 PM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အစ်ကို... ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် software လေးပါ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်...
ဒီပညာရပ်ကို အရမ်း ဝါသနာပါလို့ပါ... ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်...
ကိုဇာနည် May 22, 2012 at 12:05 PM
နေလင်းအောင် May 23, 2012 at 11:14 AM
Adobe Premier Pro 7.0 ရဲ့ စာအုပ်လေးပါရရင်ကောင်းမယ်ခင်ဗျာ...
Eng Ebook ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေးဇူးပါ... ကျနော်တို့လို Editing သမားတွေအတွက်တော့ တန်ဖိုးရှိပါတယ် :)
aung May 23, 2012 at 9:38 PM
ကိုနေမင်းမောင် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ . . အစ်ကို့ site ကနေ တော်တော်များ down ခဲ့ဘူးပါတယ် . . ဒါပေမဲ့ . . . Thank လို့ရေးဖို့ အချိန်ကိုမရဘူးဖြစ်နေတယ် . . . ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လိုချင်တာတွေကများနေတော့ . . connection လေးကောင်းတုန်း တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဆွဲနေရလို့ပါ . . . အဲဒါကြောင့် ဒီပို့စ် ကနေဘဲ အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ . .
နိုင်နိုင် May 29, 2012 at 5:50 PM
ကိုနေမင်းမောင် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် အခုလိုမျိုးဆက်လက်ပြီး ပို့စ်တွေအများကြီးတင်ပေးနိုင်ပါစေ နည်းပညာတွေလည်း ဒီ့ထက်မက ပိုမိုးတက်မြောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း ကျေးဇူးတင်စကားပြောချင်ပါတယ်ဗျာ..
Anonymous June 10, 2012 at 6:27 AM
thankalot. i download this files . someday i will use.
ဇမိုဇော် June 14, 2012 at 4:26 PM
ကိုနေမင်မောင် ကျနော်သူငယ်ချင်းများအတွက် share လုပ်လိုက်ပါတယ်နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
nainglinpaingphotoshopnote.com February 7, 2015 at 7:42 AM
Ipad နဲ့ဆွဲမရလို့ ပြောပြပေးပါပါဦးဗျာ